Soon - Wikipedia
Soon, Ṣawm () ; (sidoo kale loo yaqaano ṣiyām صيام) waa erey Af Carabi ah kaasi oo macnaheedu tahay "Af-xidhnaansho" Ilaahay dartii iyo in ajir iyo xasanaad uu helo qofka soomani.
Dadka Islaamka ah waxay soomaan Bisha Ramadan (bisha 9aad) ee Kalandarka Islaamka. waa bil Ramadan oo micnaheedu yahay in bisha ramadaan maalinteeda wax la cunin.
Diinta Islaamka oo caqiido dhab ah, ayaa waxay ku caan baxday ilaalada masaalixda aadamiga. Arintaas waxay ku soo koobtay, qof kasta oo ku abtirsada bulshada aadamiga, in la dhowro hanatidiisa, sharafkiisa, naftiisa wakhtigiisa iyo caafimaadkiisa. Wax kasta oo dhaawac u geysanaya mid kamid ah arimahaas, diinta Islaamku waa ay reebtay. Waxay ka dejisay xeerar adag oo ilaalinaya inaan lagu cayaarin. Islamarkaa Islaamku wuxuu soo dhoweeyay wax kasta oo arimahaas hagaajinaya. Bal cibaado ayuu ka dhigtay, Eebe xaggiisa lagaga helayo dhowaansho iyo abaal-gud.
waxaa jirto axaadiis ka hadasho maalinta carafada oo sabtiga ku aadan.waxaa jiro xadiis dhahaayo "Ha soomina maalinta Sabtida Soon la idinku waajib yeelay mooyee, hadduusan helina midkiin qolof canab mooyee ama laan geed ha iska calaanjiyo" Waa Xaddiis sugan.Wuxuu ku yiri al-Muxaddis al-Faqiih Sheekh Maxamed Naasirud-Diin al-Albaani -Eebbe ha u naxariistee- isagoo ka hadlaya Xaddiiskan kitaabkiisa la yiraahdo "tamaam" bogga 406 "In loo fasiro Xaddiiska in loo diidayo soonka sabtida keli ahaantiisa wuxuu ka hor imaanayaa hadalka Rasuulka c.s.w. ee uu leeyahay: "In la idinku waajib yeelay mooyee".Sidoo kale waxaa jira Axaaddiis laga dhadhansanayo macnahooda in la soomi karo, sidaas darteed waan iswaafajin karnaa oo kulmin karnaa Xaddiiskan iyo Axaaddiista kale haddii aan doonayno inaan raacno Qawaacidda cilmiga ee ku qoran kutubta Usuusha sida:
1.Nebiga c.s.w. wuxuu sameeyay iyo soonkiisii.
2.Nebiga c.s.w. wuxuu yiri sida Xaddiiska "ibnu camru".
Waxaana muuqda oo iska cad labada Xaddiisba waa la soomi karaa, kolkaasoo in la kulmiyo Axaaddiista oggolaanaya iyo Xaddiiska diidaya waxay noqonaysaa haddii aan dabbaqno Qaacidada Usuuliga inaan qaadano Xaddiiska diidaya maxaa yeelay waa kii diidayay, Xaddiiska kalena waa kii oggolaanayay. Sidoo kale wuxuu Nebigu c.s.w. ku yiri Juweyriya: "Ma doonaysaa inaad soonto beri". Macnihiisuna yahay in loo oggol yahay sidoo kale, waana laga tagayaa Xaddiiskan oggolaanaya oo waxaa la qaadanayaa Xaddiiska diidaya sida ay oranayso Qaacidada Usuuliga ee aan kor ku soo sheegnay.
Muxuu Kitaabka Soonka ka Sheegaa?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Soon&oldid=218021"
Last edited on 2 Oktoobar 2021, at 14:37
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Oktoobar 2021, marka ee eheed 14:37.